Happy GPS Myanmar FAQ - Happy GPS Myanmar
Happy GPS Myanmar / FAQ
GPS Tracker နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိထားတဲ့သူတွေလည်း ရှိသလို မသိသေးတဲ့ သူတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ မိမိ တန်ဖိုးကြီးပေးဝယ်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကို မပျောက်ဆုံးအောင် GPS တပ်ချင်ပေမဲ့ သူများတွေ ပြောနေတာ ကြားမိပြီး ကိုယ်တိုင် သိချင်နေသူများအတွက် အမေးများတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေကို အသင့် ဖတ်လို့ရအောင် ဖြေပေးထားပါတယ်နော်။
GPS ဆိုတာ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ပေးလည်း ?
GPS ( Global Positioning System ) ရဲ့ အတိုကောက်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီး လွှတ်တင်ထားသော ဂြိုလ်တုများကို အသုံးပြု၍ တည်နေရာကို ဖော်ပြပေးနိုင်သော စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ GPS စနစ်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများက လက်ရှိတည်နေရာကို ဖော်ပြပေးနိုင်သောကြောင့် လုပ်ငန်းသုံးကားတွေမှာ တပ်ဆင်ဖို့ သင့်တော်သလို မိမိကိုယ်ပိုင် ကား၊ ဆိုင်ကယ် များမှာလည်း တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြင့် ရောက်ရှိနေသောနေရာကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်
ရောက်ရှိနေသော တည်နေရာကို သိရှိနိုင်ခြင်း
လက်ရှိမောင်းနှင်နေသော အရှိန်နှုန်းကို သိရှိနိုင်ခြင်း
ခရီးတစ်လျှောက် ရပ်နားကြာချိန်များကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
ယဉ်လမ်းကြောင်း သွားခဲ့သည်များကို ပြန်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
သတ်မှတ်ထားသော အရှိန်ထက် ပိုမိုမောင်းနှင်ပါက အကြောင်းကြားပေးခြင်း
မိမိ သတ်မှတ်ထားသောဧရိယာ ကျော်လွန်ပါက အကြောင်းကြားပေးခြင်း
ကားအတွင်းစကားပြောသံများနားထောင်နိုင်သည့်အပြင် Live Video ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
တို့ အပြင် တခြားသော function ပေါင်းများစွာဖြင့် မိမိတို့၏ ယာဉ်အား စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Happy GPS Myanmar မှ တပ်ဆင် နိုင်သော GPS အမျိုးအစားများ
ကားများ ဆိုင်ကယ်များ မှာ GPS Tracker များကို တပ်ဆင်ရောင်းချပေးပါသည်။ ဆီဖြတ်နိုင်သော GPS အမျိုးအစားများ BlackBox နဲ့ တွဲထားသော GPS များ စသည်ဖြင့် အဆင့်မြင့် GPS များကို Happy GPS တွင် လာရောက် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။
အဝေးမှ စက်ရပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလား ?
ဟုတ်ကဲ့ပါ အဝေးမှ စက်ရပ်ခြင်း အနားမှအသံများကို နားထောင်နိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပြီး အရေပေါ် SOS ခလုပ်ကို ၃ စက္ကန့် မျှဖိထားယုံဖြင့် GPS Tracker မှ ဖုန်းခေါ်ပေးခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကားများအတွက် BlackBox နဲ့တွဲထားသော GPS Tracker များလည်းရှိပါတယ်။ Black Box နဲ့ တွဲထားသောကြောင့် ကားထဲမှ အသံများ ရုပ်များအား Live View ကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
GPS က ဆိုင်ကယ်တို့ ကားတို့ စက်ရပ်ထားရင် သို့မဟုတ် ဖြုတ်လိုက်ရင်ရော အလုပ်လုပ်ပါသလား ?
Happy GPS မှ ရောင်းချသော GPS များသည် Build in Battery ပါဝင်သောကြောင့် power cut off ဖြစ်သွားခဲ့လျှင် User အား ချက်ချင်းဖုန်းမကိုင်မချင်းခေါ်ပေးသည့်အပြင် ၄၈ နာရီ အထိ အထဲမှာ ပါဝင်သော Battery ဖြင့် ဆက်လက်အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။